Ihowuliseyili Iibhodi zeSekethe zeBhodi eQinisekileyo yoBhedu | ICAMTECH PCB
Ekhaya > Iimveliso > Yangamafu Copper Pcb
Ii-PCB ze-copper ezishinyeneyo zibonakaliswa zizakhiwo ezinobunzima bobhedu ukusuka kwi-105 ukuya kwi-400 µm. Ezi PCBs zisetyenziselwa iziphumo ezinkulu (eziphezulu) ezikhoyo ngoku kunye nokwenza ngcono ulawulo lwe-thermal. Ubhedu olungqingqwa luvumela amacandelo amakhulu e-PCB ukuba angene kwimithwalo ephezulu yangoku kwaye akhuthaze ukusasaza kobushushu. Ezona zoyilo ziqhelekileyo zi-multilayer okanye zimbini-emacaleni. Ngale teknoloji yePCB kuyenzeka ukuba kudityaniswe izakhiwo ezinobume obuhle kumaleko angaphandle kunye nakwimaleko yobhedu eshinyeneyo kwimaleko yangaphakathi. Izinto eziluncedo ashinyeneyo yethusi PCB:
Ubunzima be-PCB yethusi busetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo ezahlukeneyo zasendlini, iimveliso zetekhnoloji ephezulu, emkhosini, kwezonyango nakwezinye izixhobo ze-elektroniki. Ukusetyenziswa kwe-PCB enobhedu eshinyeneyo kwenza ukuba icandelo lezinto ze-elektroniki-iibhodi zesekethe zibe nobomi benkonzo ende, kwaye kwangaxeshanye kuluncedo kakhulu ekunciphiseni ubungakanani bezixhobo ze-elektroniki.